Sidee loo helaa geeyo Spotify tayo sare leh?
Music waa mid xiiso leh marka aad maqli karto si aad u garaaca kasta iyo midab. Saamaynta ay music saafi ah abuuri kara dareenka ah hamiday iyo xamaasad in lover music ah xiri kara. Sida daawashada filim ama video in High Qeexid waa waayo-aragnimo la yaab leh, u helaan music tayo sare leh waa dareen cajiib ah. Spotify ayaa tan laga heli karaa click ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inay raacaan talaabooyinkan fudud qaar ka mid ah oo aad ku raaxaysan karaan music tayo sare leh baahida. On music tayada Spotify u sarraysaa sida 320kbps waa la heli karaa. Laakiin, waxaa jira xadeynta gaar ah si ay u helaan in geeyo tayo sare leh.
Marka aan qaato ku saabsan music, tayada sanqadhiisana waa la ma balanqaadi karin. Iyo Spotify ma aha in niyad isticmaala ay u kala doorasho wanaagsan ee suuqa samaynta. Spotify ayaa siyaabo kala duwan ee kala duwan ee isticmaala. Laga soo bilaabo noocyo music, playlists , fannaaniin , adeegyada xubinnimada, idaacadaha, music ka waqtiyo kala duwan, iyo tayada geeyo of music ee ay rabaan in ay dhagaystaan. Hadda oo ka mid ah liiska dheer ee muuqaalada, laakiin hadda waxaan kaala hadli doonaa hagaajin kartaa music la dhageysto waayo-aragnimo ah oo ku saabsan qalab aad. Waxaad dooran kartaa ka fursadaha la heli karo iyo tayo ku haboon qorshaha isticmaalka xogta network iyo sidoo kale buuxin aad jeceshahay inaad la muusiko dhegayso oo tayo leh.
Qaybta 1. tayada sare Spotify ee computer
Qaybta 2.How in la beddelo tayada music on App (Android iyo macruufka users)
Qaybta 3.How si ay u dejiyaan qayb-heerka si loo hagaajiyo tayada hoorto
Download music Spotify High Quality Streaming free la TunesGo
Tayada 1.High Spotify ee computer
User 1. Mac
Halkan waxa isticmaala Mac u baahan tahay inaad samayso si Het tayo sare leh Spotify geeyo. Waa talaabooyin fudud oo la fulin karo iyada oo la adeegsanayo qof Spotify.
: Riix menu Spotify ah
: Dooro la door ka menu pop-up ka
Laga soo bilaabo qaybta tayada muusiga, ku beddelato biiro toggle ku saabsan (cagaar noqdo) oo aad u helaan music geeyo tayo sare leh.
Riix edit menu, Select door bidaan iyo beddelaan biiro toggle tayada music on inay dhegaystaan ​​tayo sare leh oo la soco music.Please in tani ay geeyo tayo sare leh oo diyaar u ah Premium warsan kaliya.
2.How in la beddelo tayada music on App (Android iyo macruufka users)
Halkan waxa ku jira stels fudud haddii aad rabto in aad beddesho oo tayo leh music ku saabsan app. Xusuusnow, si fiican tayada muusiga si fiican u noqon doonaa inaad waayo-aragnimo. Sidaas, waxaa muhiim ah in aad leedahay heerka ugu sareeya music yara haddii aad raadineyso weeyna si aad u hesho waayo-aragnimo ugu fiican.
: Tag menu iyo goobaha la doortay
: Tubada tayada music iyo tayada il dooro (caadi ah, sare ama xad-dhaaf ah)
3.How si ay u dejiyaan qayb-heerka si loo hagaajiyo tayada geeyo
Heerka Inyar waxaa loo arkaa inay qiyaasta lagu cabbiro si ay qiimeyn tayada codka ah track audio ama music kasta oo ay. Higher heerka fiican yahay tayada. Laakiin waxay noqon kartaa sare ku filan A.villa xad go'an. Guud ahaan music tayo sare leh ayaa lagu qiimeeyaa u sarraysaa sida 320 kbps (oo mararka qaarkood in a 480 kbps) halka music tayada audio caadi lahaa heerka xoogaa ku wareegsan 160 kbps.
Spotify ayaa 3 heer yara duwan diyaar u isticmaala si kor loogu qaado ay waayo-aragnimo dhegaysiga muusikada. Dhammaan waxa aad u baahan tahay si ay u tagaan waa raac talaabooyinka soo socda.
Fiiro gaar ah: In kastoo adeegaan la heli karo ee isticmaala account premium, laakiin dadka isticmaala lacag la'aan ah ayaa sidoo kale kor loogu qaado heerka karaa xoogaa laakiin isticmaalaya codsiyada kale ee internet-ka (waxaad wici kartaa Galaydh ama galo daaqadda).
: Helaan goobaha Spotify iyo durdur la xusho oo ka mid ah liiska.
• Wixii macruufka isticmaala qalab.
dooro bandwidth (tayo geeyo) ku haboon baahidaada.
• Dadka isticmaala desktop
Waxaad dooran kartaa 2 fursadaha: caadi mugga ama bitrate sare.
Inkasta oo aad ku bedelan laga yaabaa in goobaha iyo awood geeyo tayada xoogaa ah. Fadlan hubi in aad leedahay khadka internet caafimaad. Isticmaalka adeegyada Spotify ee bandwidth miskiin ah ama xiriir aan caafimaad lahayn ma ay samatabbixin lahaa adeegyada la filayaa iyo tayada music laga yaabaa in aan in si wanaagsan loo.
Sidoo kale wareegaya heerka waxoogaa sare macnaheedu heerka dhakhso download, tani waxa ay tilmaamaysaa in qorshaha la xidhiidha macluumaadka aad u baahan tahay si ay u hubiyaan in heshiiska wareejinta xogta xawaare sare. Haddii qorshaha ma taageeri xawaaraha in, waxaa laga yaabaa in aad dareento wax xagga tayada u kala geeyo ah.
Oo sidaas waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan adeegyada internet wanaagsan, lagu kalsoonaan karo oo caafimaad leh si ay u isticmaalaan geeyo tayo fiican Spotify.
> Resource > Spotify > Sida lagu Helo Spotify Tayada Sare ee Streaming?